မဂၤလာသက္တမ္း ၆ နွစ္ျပည့္ေလးမွာ တန္းဖီုးၾကီးလက္ေဆာင္ေတြနဲ႕ ခ်စ္ရတဲ့ဇနီးေလးကို Suprise လုပ္ေပးခဲ့တဲ့ သရုပ္ေဆာင္ ထူးျခား… – Cele Snap
မင်္ဂလာသက်တမ်း ၆ နှစ်ပြည့်မှာ တန်ဖိုးကြီးလက်ဆောင်တွေနဲ့ ချစ်ဇနီးလေးကို Surprise လုပ်ခဲ့တဲ့ ထူးခြားဝါရင့်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ထူးခြားကတော့ အနုပညာလောကမှာ နေရာတစ်ခုကိုရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ စွယ်စုံရအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အနုပညာအလုပ်တွေကိုအချိန်အတော်ကြာလုပ်ကိုင်လျက်ရှိနေခဲ့တဲ့ သူကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့တာပါ
ကိုဗစ်ကာလမှာတော့ ထူးခြားက အနုပညာအလုပ်တွေကို ရပ်နားထားပြီး ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေကို ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်လျက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်
သာယာပျော်ရွှင်စရာ အိမ်ထောင်ရေးလေးကို တည်ဆောက်ထားတဲ့ ထူးခြားကတော့
ယနေ့မှာ မင်္ဂလာနှစ်သက်တမ်း (၆)နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ မင်္ဂလာသက်တမ်း (၆) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ချစ်ဇနီးချော ကို တန်ဖိုးကြီး လက်ဆောင်လေးနဲ့ Suriprise လုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဇနီးဖြစ်သူက လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။
ဒီတန်ဖိုးကြီး လက်ဆောင်ကတော့ ရွှေသားကြီးပဲပြုလုပ်ထားတဲ့ လက်ဝတ်ရတနာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပုံလေးတွေနဲ့လည်း ဇနီးဖြစ်သူက “Anniversary gift လေးလက်ခံရရှိ ၆နှစ်ဆိုပါ့လား?? မြန်ချက်နော်….. ဘဝကြီးကိုခံစားမှုရောင်စုံဘောလုံးဖန်တီးပေးသောဘိုးတော်….ချစ်တယ်” ဆိုပြီး ရေးသားထားပါသေးတယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်း မင်္ဂလာသက်တမ်း ၆ နှစ်ပြည့်သွားတဲ့ ထူးခြားတို့ ဇနီးမောင်တို့ကို ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့ကြပါအုန်းနော်
မငျ်ဂလာသကျတမျး ၆ နှစျပွညျ့မှာ တနျဖိုးကွီးလကျဆောငျတှနေဲ့ ခစြျဇနီးလေးကို Surprise လုပျခဲ့တဲ့ ထူးခွားဝါရငျ့အနုပညာရှငျတစျယောကျဖွစျတဲ့ ထူးခွားကတော့ အနုပညာလောကမှာ နရောတစျခုကိုရယူထားနိုငျခဲ့တဲ့ စှယျစုံရအနုပညာရှငျတစျယောကျပဲဖွစျပါတယျ။
အနုပညာအလုပျတှကေိုအခြိနျအတောျကွာလုပျကိုငျလကြျရှိနခေဲ့တဲ့ သူကတော့ ပရိသတျတှရေဲ့ ခစြျခငျအားပေးမှုကို အခိုငျအမာရယူထားနိုငျခဲ့တာပါ
ကိုဗစျကာလမှာတော့ ထူးခွားက အနုပညာအလုပျတှကေို ရပျနားထားပွီး ကိုယျပိုငျလုပျငနျးတှကေို ပွောငျးလဲလုပျကိုငျလကြျရှိနတောဖွစျပါတယျ
သာယာပြောျရှှငျစရာ အိမျထောငျရေးလေးကို တညျဆောကျထားတဲ့ ထူးခွားကတော့
ယနေ့မှာ မငျ်ဂလာနှစျသကျတမျး (၆)နှစျပွညျ့ခဲ့ပွီဖွစျပါတယျ။ မငျ်ဂလာသကျတမျး (၆) နှစျပွညျ့ အထိမျးအမှတျအနနေဲ့ ခစြျဇနီးခြော ကို တနျဖိုးကွီး လကျဆောငျလေးနဲ့ Suriprise လုပျပေးခဲ့တာဖွစျပွီး ဇနီးဖွစျသူက လူမှုကှနျယကျစာမကြျနှာမှာ ဖောျပွလာခဲ့ပါတယျ။
ဒီတနျဖိုးကွီး လကျဆောငျကတော့ ရှှသေားကွီးပဲပွုလုပျထားတဲ့ လကျဝတျရတနာ ပဲဖွစျပါတယျ။ ဒီပုံလေးတှနေဲ့လညျး ဇနီးဖွစျသူက “Anniversary gift လေးလကျခံရရှိ ၆နှစျဆိုပါ့လား?? မွနျခကြျနောျ….. ဘဝကွီးကိုခံစားမှုရောငျစုံဘောလုံးဖနျတီးပေးသောဘိုးတောျ….ခစြျတယျ” ဆိုပွီး ရေးသားထားပါသေးတယျ။ပရိသတျကွီးလညျး မငျ်ဂလာသကျတမျး ၆ နှစျပွညျ့သှားတဲ့ ထူးခွားတို့ ဇနီးမောငျတို့ကို ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးခဲ့ကွပါအုနျးနောျ